एकता टुंगिएको २ दिन नबित्दै नेकपामा फुट, पूर्वमाओवादी एकता नमान्ने ! — Sanchar Kendra
एकता टुंगिएको २ दिन नबित्दै नेकपामा फुट, पूर्वमाओवादी एकता नमान्ने !
काठमाडौं । जबस मोर्चाहरुको एकता टुंगिएको २ दिन नबित्दै सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीभित्र लफडा सुरु भएको छ । पूर्वमाओवादी निकट मजदु संगठन अखिल नेपाल ट्रेड युनियन महासंघले हालै भएको एकता प्रक्रिया नमान्ने जनाएको छ ।
विधि, प्रक्रिया र पद्दतिविपरीत एकता गरिएको भन्दै गणेश रेग्मी नेतृत्वको महासंघले एकता नमान्ने चेतावनी दिएको हो । पूर्वएमाले र पूर्वमाओवादी निकट मदजुर संगठनबीच केही दिनअघि एकता भएको थियो ।
संयोजक पूर्वएमालेबाट जिफन्ट अध्यक्ष विनोद श्रेष्ठ र सह–संयोजकमा पूर्वमाओवादीको ट्रेड युनियनका महासचिव जगत सिंखडा तोकिएका थिए । तर, विधिमा एकातिरका अध्यक्ष संयोजक हुँदा अर्कोतिरका अध्यक्ष सह–संयोजक हुने तय भए पनि त्यसलाई तोड्ने काम भएकाले स्वीकार नगर्ने रेग्मी समूहको भनाइ छ ।
रेग्मी नेतृत्वको असन्तुष्ट समूहले नेकपा अध्यक्षद्वय केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भेटेर एकता प्रक्रियामा कमजोरी भएकाले नमान्ने भन्दै ज्ञापनपत्र बुझाएको छ । रेग्मीले पार्टीले तय गरेको एकतासम्बन्धी नीति र विधिविपरीत तथा मजदुरहरुको अहितमा रहेकाले स्वीकार गर्न नसकिने बताए ।
यसैबीच नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)को नेतृत्वमाथि प्रस्तावित पोलिटब्युरो सूची सच्याउन दबाब परेको छ । अध्यक्ष केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालसँगको परामर्शमा तयार पारेको सूची बाहिरिएपछि आकांक्षीहरूले दबाब बढाएका हुन् ।
दबाब झेल्न नसकेपछि आइतबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बोलाइएको सचिवालय बैठक शीर्ष नेताहरूबीच आवश्यक गृहकार्य पूरा भएपछि बस्ने गरी स्थगित भएको छ ।
पूर्वएमालेमा राजेन्द्र राई र ठाकुर गैरेको नाममा अडान
वरिष्ठ नेता नेपाल, सचिवालय सदस्यहरू रामबहादुर थापा बादल र विष्णु पौडेलसमेत बसेर अध्यक्ष ओली र प्रचण्डले पोलिटब्युरोको सूची गृहकार्य गरेका थिए । तर, उक्त सूचीबारे सचिवालय बैठकमै नेताहरूले प्रश्न उठाएपछि छलफल जनसंगठनको एकता टुंग्याउने एजेन्डातर्फ मोडिएको थियो ।
पार्टी प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठले पनि सूची बाहिरिएपछि नेतृत्व दबाबमा परेको संकेत गर्दै संशोधित सूचीपछि मात्र छलफल हुन सक्ने बताए । प्रवक्ता नारायणकाजी श्रेष्ठ भन्छन् ‘अध्यक्ष प्रचण्डले पहिले तय भएको नाम होइन, अर्को नाममा मात्र छलफल हुन्छ भन्नुभएको छ ।
अबको बैठकमा अर्को सूची पेस भएमा मात्र पोलिटब्युरो टुंगो लगाउने एजेन्डामा छलफल हुन्छ, नत्र कार्यविभाजन र प्रवासी मञ्चको एकताबारे छलफल केन्द्रित हुन सक्छ ।’
फुटेर गएको बादल समूहपछि एकीकरणमा आएको र नारायणकाजी श्रेष्ठको पनि छुट्टै समूह रहेकाले वरिष्ठताको आधारभन्दा दुवै समूहको सन्तुलन मिलाउनुपर्ने बाध्यता प्रचण्डलाई छ । चार सय ४१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीको एकतिहाइ एक सय ४७ सदस्यीय पोलिटब्युरोमा पूर्वएमालेले ८१ र माओवादी समूहले ६६ जनाको भागबन्डा गरिसकेका छन्  । नयाँ पत्रिका दैनिकले समाचार लेखेको छ ।